श्मिट कपडा: फेसनदार नेत्रवस्तु
जेब्रावुड सनग्लास, स्टार्स र बार्स लकड़ीका केस, ध्रुवीकरण,
चेरी वुड फुल फ्रेम, धातु ट्रिम र बाँसको केसको साथ ध्रुवीकरण
वास्तविक चप्पल धूप का चश्मा, आइस निलो ध्रुवीकृत लेन्स, हस्तशिल्प
निलो ध्रुवीकृत धमिलो लेन्स र केसको साथ जेब्रावुड सनग्लासहरू
रातो बाँस कछुए फ्रेम फ्रेमको साथ धूपको चश्मा लकड़ी का केस, ध्रुवीकरण,
कालो काठ र धातु धूप का चश्मा, G15 बाँस केसको साथ ध्रुवीकृत लेन्स
जेब्रावुड पूर्ण फ्रेम ध्रुव चश्मा ध्रुवीकरण
बांसको केसको साथ ह्यान्डक्र्याफ्ट्ड वालट वुड क्लब शैली धूपको चश्मा,
मध्यरात्रि कालो बाँस क्लब धूप चश्मा केसको साथ
रसदार फल Muti- रंग बांस धूप का चश्मा मामला संग ध्रुवीकृत
सूर्यास्त ध्रुवीकरण धूप का चश्मा, काला बाँस लकड़ी का मामला संग
चेरी वुड र एसीटेट ध्रुव चश्मा
टकसाल हरियो चेरी
हसानामा ज्यास न्यू योर्क रोइस धूप का चश्मा
चेरी वुड र एसीटेट ध्रुव चश्मा मामला संग
स्केटबोर्ड मल्टि-लेयर क्लब धूप का चश्मा, काला ध्रुवीकृत लेन्स
स्केटबोर्ड मल्टि-लेयर-क्लब धूप का चश्मा, ध्रुवीकृत लेन्स, केसको साथ
सूर्यास्त मिरर लेन्स पूर्ण फ्रेम कालो बांस र केस संग ध्रुवीकृत
ग्रेनाइट रंगीन फ्रेम, बाँस धूप का चश्मा, लकड़ी केस संग ध्रुवीकृत
निलो ध्रुवीकृत लेन्सको साथ जेब्रावुड धूप का चश्मा
रातो पट्टी दुई टोन धूप का चश्मा, उत्कीर्ण र ध्रुवीकरण
रोजवुड धूप का चश्मा लकड़ी का केस संग, ध्रुवीकृत, कारीगर उत्कीर्ण,
नियमित मूल्य $ 70.38 बचत गर्नुहोस् $ -70.38
प्रीमियम जेब्रावुड स्टार र स्ट्रिप्स धूप का चश्मा, ध्रुवीकरण, HandCraftted, UV 400 सुरक्षा, विरोधी चिंतनशील बिरालो3लेन्स, कारीगर उत्कीर्ण, पर्यावरण मैत्री।
शामेलग्स, बाँसको केस, नि: शुल्क माइक्रोफाइर पाउच, माइक्रोफाइबर सफाई कपडा, धूप काँचको पट्टि र ध्रुवीकरण टेस्ट कार्ड समावेश गर्दछ!
साइजिंग: फ्रेम चौड़ाई: .5.75..1.9 इन्च - फ्रेम उचाई: २.१२ इन्च - मन्दिर लम्बाई: 5.6 इन्च।
Polarized: ध्रुवीकृत लेन्सहरु चमक हटाउँछ वा कम गर्छ। हाम्रो लेन्स विशेष गरी १००% UVA र UVB सुरक्षा प्रस्ताव गर्न को लागी गहन प्रकाशको स्थितिमा डिजाइन गरीएको छ। ध्रुवीकृत सुरक्षा बिना, गहिराइ धारणा कम हुन्छ, विकृत दृश्य र रंग धारणा देखा पर्दछ, र केहि अवस्थाहरूमा, तपाईं अस्थायी रूपमा अन्धा हुन सक्नुहुन्छ। ध्रुवीकरण ड्राइभिंग, चरम खेल, पानी खेल, र माछा मार्ने सहित धेरै बाहिरका गतिविधिहरूको लागि उपयोगी छ। ध्रुवीकृत धूप का चश्माका फाइदाहरू अनन्त छन् र तपाईंको दृष्टि बचत गर्न सक्छन्!
हस्तशिल्प: प्रत्येक जोडी इle्ग्लाबर्ट्स सनग्लासहरू व्यक्तिगत रूपमा प्रीमियम काठ र कारीगर कुँदिएकोसँग हस्तनिर्मित छन्। काठको अन्नमा भिन्नताका कारण, कुनै पनि दुई बिल्कुल उस्तै हुनेछैनन्। तपाईं कती अनौंठो हुनुहुन्छ।
UV 400 संरक्षित: ईन्ग्लेबर्ट्स सनग्लाससँग यूभी protected०० संरक्षित लेन्सहरू छन्। UV 400 संरक्षित धूप का चश्मा 400०० नानोमीटर जति सानो प्रकाश किरणहरू रोक्न सक्षम छन्। यसको मतलब सूर्यको हानिकारक विकिरणको to 400 देखि १०० प्रतिशतसम्म आँखाबाट टाढा राखिएको छ, जसले आँखा सुरक्षामा ठूलो फरक पार्न सक्छ।
वसन्त टिका: दैनिक आकारको सामना गर्न सक्षम, विभिन्न आकारका हेडहरू समायोजित गर्न गति र सुविधाको अधिक दायरा प्रदान गर्दछ।
Lay तह बिराला L लेन्स: बिरालो L लेन्स उच्चतम रेटेड लेन्सहरू हुन् जुन तपाईं लगाउन सक्नुहुन्छ र अझै पनि ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ।
विरोधी चिंतनशील: दृष्टि सुधार गर्दछ, आँखा तनाव कम गर्दछ र तपाईंको चश्मा अधिक आकर्षक देखिन्छ।
स्टाइलिश: क्लासिक भिन्टेज शैली जुन सबैलाई राम्रो देखिन्छ तर तपाईंलाई त्यो पहिले नै थाहा थियो। तपाइँ प्रशंसा प्राप्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ!
हल्का: तपाईंको एन्ग्लबर्ट्स प्रीमियम काठ धूपको चश्मा प्लास्टिक भन्दा हल्का छन्।
वातावरण मैत्री: प्लास्टिक धूप का चश्मा त्यागेर ग्रीन जानुहोस्। इम्लेबर्ट्स प्रीमियम सनग्लास टिकाऊ हुन्। बाँस पृथ्वीमा सब भन्दा द्रुत बृद्धि हुने बोटहरू हुन् जसका केही प्रकारहरूको २3घण्टामा feet फिटसम्मको वृद्धि दर रहेको छ। बाँस छिटो बढ्ने घाँस हो, यसको लागि कुनै मल चाहिन्छ र आफ्नै जराबाट स्व-पुनर्जन्मको आवश्यकता पर्दैन, त्यसैले यसलाई पुन: रोप्नु आवश्यक पर्दैन।
राम्रो कामहरु: तपाइँ तपाइँको इle्ग्लेबर्ट्स सनग्लासमा बधाई पाउनुहुनेछ, निश्चित हुनुहोस् जसले तपाइँ बधाई दिनुहुन्छ तपाइँले उनीहरू कहाँ पाउनुभयो भन्ने थाहा पाउनु हुन्छ। Boom! दिनको राम्रो काम पूरा भयो।
100% सन्तुष्टि गारंटी: - हामी हाम्रो सनग्लास उत्पादनहरूमा विश्वस्त छौं। यदि तपाइँ तपाइँलाई मनपराउँनुहुन्न भने, तिनीहरूलाई पूर्ण फिर्ताको लागि फिर्ता गर्नुहोस्।
At एङ्गलबर्ट्स हामी हाम्रो धूपको चश्मामा अरू भन्दा थोरै राख्छौं। हातले बनाएको प्रत्येकसँग, हाम्रा सबै सनग्लासहरू ध्रुवीकरण गरिएको, यूवी 400०० सुरक्षित भएको, एन्टिफ्लिभेटिभ लेन्सहरू छन् र हल्का वजन भएको सुनिश्चित गर्दै। तपाईं हाम्रो चश्मा वास्तविक प्राकृतिक काठ, इको-मैत्री, टिकाऊ, कारीगर कुँदिएको र स्टाइलिश बनेको पाउनुहुनेछ। हामी स्टेनलेस स्टील स्प्रिंग टिका, बिरालो le लेन्सको प्रयोग गर्छौं र जब यो सबै भनिन्छ र सम्पन्न हुन्छ तपाईले ठूलो मूल्य र सनग्लासको जोडी पाउनुहुन्छ जुन तपाई जस्तो अनौंठो हुन्छ।
हामी प्रत्येक जोडीलाई पोर्टेबिलिटीका लागि नि: शुल्क माइक्रोफाइबर थैली, एक नि: शुल्क माइक्रोफाइबर सफाई कपडाको साथ छिटो राख्नेछौं तपाईंलाई ड्यापर, नि: शुल्क सनग्लास पट्टि दिँदै ताकि तपाईं यी राष्ट्रिय खजानेहरू नगुमाउनुहोस्। हेक, हामी एक निःशुल्क ध्रुवीकरण टेस्ट कार्डमा पनि हालिन्छौं ताकि तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईं वास्तविक सम्झौता पाउँदै हुनुहुन्छ। सबै सानो अतिरिक्त अतिरिक्त प्रत्येक खरीद मा शामिल छ कि तपाईं र हामी दुबै अलग गर्दछ
हामी अहिलेसम्म सम्पन्न भएका छैनौं, तपाईंको जोडीले एक सुरक्षा बांसको केस पनि समावेश गर्दछ। यी सुन्दर हस्तशिल्प बाँसका केसहरू भन्दा तपाईंको प्रीमियम धूपको चश्मा जोगाउन यो भन्दा उत्तम तरीका छैन। यो भित्र पृथ्वीको गन्ध encapsulates। तपाईं सुख्खा पृथ्वीको सुगन्ध संग खुशी हुनेछ। सबै संग राम्रो कर्म ल्याउँदै जो यसको स्वामित्वमा छ। (चेतावनी: तपाईको बाँसको भित्री भाग सुगन्धित बानी हुन सक्छ)।
आफूलाई एम्लेबर्ट्स प्रीमियम काठ धूपको चश्मासँग अलग गर्नुहोस्!
नियमित मूल्य $ 48.00 बचत गर्नुहोस् $ -48.00
ठीक छ त्यसैले हाम्रो ईन्ग्रेभरले उसको उत्तम दिन पाइरहेको थिएन। यी धूपको चश्माको भित्री बाहुमा पोलारीज्ड हुन्छ। हाम्रो गल्ती तपाईंको लाभ हो। यी सनग्लासहरू त्रुटि प्रतिबिम्बित गर्न चिन्ह लगाईन्छ र गम्भीर छुटमा शेड्सको मीठा जोडी स्कोर गर्ने तपाईंको मौका हो।
एङ्गलबर्ट्स धातु ट्रिम धूप का चश्माको साथ प्रीमियम चेरी काठ पूर्ण फ्रेम। ध्रुवीकृत, HandCraftted, UV 400 सुरक्षा, विरोधी चिंतनशील बिराला3लेन्स, पर्यावरण मैत्री।
शामेलग्स: नि: शुल्क माइक्रोफाइबर पाउच, नि: शुल्क माइक्रोफाईबर क्लीनिंग, नि: शुल्क धूप गिलास पट्टि, निःशुल्क ध्रुवीकरण परीक्षण कार्ड र नि: शुल्क शिपिंग।
साइजिंग: फ्रेम चौड़ाई: .5.67..2.12 इन्च - फ्रेम उचाई: २.१२ इन्च - मन्दिर लम्बाई: 5.75 इन्च।
ध्रुवीकृत लेन्सहरू: ध्रुवीकृत लेन्सहरु चमक हटाउँछ वा कम गर्छ। हाम्रो लेन्स विशेष गरी १००% UVA र UVB सुरक्षा प्रस्ताव गर्न डिजाइन गरिएको हो गम्भिर प्रकाश अवस्थाहरूमा पनि। ध्रुवीकृत धूप का चश्माका फाइदाहरू अनन्त छन् र तपाईंको दृष्टि बचत गर्न सक्छन्!
वसन्त टिका: स्टेनलेस स्टील काजहरू विभिन्न आकारका हेडहरू समायोजन गर्न गति र आरामको अधिक दायरा प्रदान गर्दछ, यसले तपाईंको सनग्लासलाई दैनिक प्रयोगको सामना गर्न सक्षम बनाउँदछ।
स्टाइलिश: इन्ग्लेबर्ट्स काठको धूपको चश्मासँग क्लासिक भिन्टेज शैली छ जुन सहज र सबैजनालाई राम्रो देखिन्छ, तर तपाईंलाई त्यो थाँहा नै थियो। तपाइँ प्रशंसा प्राप्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ!
वातावरण मैत्री: प्लास्टिक धूप का चश्मा त्यागेर ग्रीन जानुहोस्। इम्लेबर्ट्स प्रीमियम सनग्लास टिकाऊ हुन्। बाँस पृथ्वीमा सब भन्दा द्रुत बृद्धि हुने बोटहरू हुन् जसका केही प्रकारका २3घण्टामा feet फिटसम्मको वृद्धि दर रहेको छ। बाँसलाई कुनै मल चाहिन्छ र आफ्नै जराबाट स्व-पुनर्जन्मको आवश्यकता पर्दैन, त्यसैले यसलाई पुन: रोप्नु आवश्यक पर्दैन।
मूल्य: प्रत्येक जोडी इle्ग्लेबर्ट्स नि: शुल्क नरम माइक्रोफाइबर पाउच, एक microfiber सफाई कपडा र sunglass पट्टिहरु संग आउँछ।
धूपको चश्माले सूर्यलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र बदले तपाईंको व्यक्तित्व झल्काउँछ। एङ्गलबर्ट्स एक कारणका लागि स्थापित गरिएको थियो: तपाईंलाई मूल, अद्वितीय, र्याड, विशिष्ट र एकदम सीधा देखिने बनाउनको लागि।
एकचोटि तपाईंले यी प्रयास गर्नुभयो, तपाईं तिनीहरूलाई लिन सक्नुहुन्न, तिनीहरू सहज छन् कि, कार्यशील।
At एङ्गलबर्ट्स हामी हाम्रो धूपको चश्मामा अरू भन्दा थोरै राख्छौं। हातले बनाएको प्रत्येकसँग, हाम्रा सबै सनग्लासहरू ध्रुवीकरण गरिएको, यूवी 400०० सुरक्षित भएको, एन्टिफ्लिभेटिभ लेन्सहरू छन् र हल्का वजन भएका छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गरेर। तपाईं हाम्रो चश्मा वास्तविक प्राकृतिक काठ, इको-मैत्री, टिकाऊ, कारीगर कुँदिएको र स्टाइलिश बनेको पाउनुहुनेछ। हामी स्टेनलेस स्टील स्प्रिंग टिका, बिरालो le लेन्सको प्रयोग गर्दछौं र जब यो सबै भनिन्छ र सम्पन्न हुन्छ तपाईले ठूलो मूल्य र सनग्लासको जोडी पाउनुहुन्छ जुन तपाई जस्तो अनौंठो हुन्छ।
हामी प्रत्येक जोडीलाई पोर्टेबिलिटीका लागि नि: शुल्क माइक्रोफाइबर थैली, एक नि: शुल्क माइक्रोफाइबर सफाई कपडाको साथ छिटो राख्नेछौं तपाईंलाई ड्यापर, नि: शुल्क सनग्लास पट्टि दिँदै ताकि तपाईं यी राष्ट्रिय खजानेहरू नगुमाउनुहोस्। हेक, हामी एक निःशुल्क ध्रुवीकरण टेस्ट कार्डमा पनि हालिन्छौं ताकि तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईं वास्तविक सम्झौता पाउँदै हुनुहुन्छ। सबै सानो अतिरिक्त अतिरिक्त प्रत्येक खरीद मा शामिल छ कि तपाईं र हामी दुबै अलग गर्दछ।
नियमित मूल्य $ 87.98 बचत गर्नुहोस् $ -87.98
ईन्ग्लेबर्ट्स १००% वास्तविक स्यान्डलवुड सनग्लास, आइस निलो ध्रुवीकृत लेन्स, हस्त शिल्प, यूवी Protection०० संरक्षण, विरोधी प्रतिबिम्बित बिरालो L लेन्स, आर्टिजन एन्ग्रेभ्ड, इको-फ्रेन्डली।
ठ्याक्कै शून्य मानिसहरू तपाईलाई यस चप्पलको धूपको चश्माको साथ आउट-स्टाइलि! हुनेछन्!
समावेश गर्दछ: चप्पल लकड़ी धूप का चश्मा, नि: शुल्क microfiber पाउच, नि: शुल्क microfiber सफाई कपड़ा, नि: शुल्क धूप गिलास पट्टि र निःशुल्क ध्रुवीकरण परीक्षण कार्ड!
साइजिंग: फ्रेम चौड़ाई: .5.5..1.5 इन्च - फ्रेम उचाई: २.१२ इन्च - मन्दिर लम्बाई: 5.5 इन्च।
विशेषताहरु: ध्रुवीकृत लेन्सहरू: ध्रुवीकृत लेन्सहरु चमक हटाउँछ वा कम गर्छ। हाम्रो लेन्स विशेष गरी १००% UVA र UVB सुरक्षा प्रस्ताव गर्न डिजाइन गरिएको हो गम्भिर प्रकाश अवस्थाहरूमा पनि। ध्रुवीकृत धूप का चश्माका फाइदाहरू अनन्त छन् र तपाईंको दृष्टि बचत गर्न सक्छन्!
ब्लू ध्रुवीकृत धमिलो लेन्स र वुड केस, HandCraftted, UV 400 सुरक्षा, विरोधी चिंतनशील बिरालो3लेन्स, पर्यावरण-मैत्री संग Zebrawood धूप का चश्मा।
शामेलगस, वुड केस, फ्रि माइक्रोफाइबर पाउच, नि: शुल्क माइक्रोफाईबर क्लीनिंग, नि: शुल्क सनग्लास स्ट्र्याप र नि: शुल्क ध्रुवीकरण टेस्ट कार्ड शामेल छ।
साइजिंग फ्रेम चौड़ाई: 5.75 इन्च - फ्रेम उचाई: १.1.9 इन्च - मन्दिर लम्बाई: 5.75 इन्च।
ध्रुवीकृत लेन्स: ध्रुवीकृत लेन्सहरु चमक हटाउँछ वा कम गर्छ। हाम्रो लेन्स विशेष गरी १००% UVA र UVB सुरक्षा प्रस्ताव गर्न डिजाइन गरिएको हो गम्भिर प्रकाश अवस्थाहरूमा पनि। ध्रुवीकृत धूप का चश्माका फाइदाहरू अनन्त छन् र तपाईंको दृष्टि बचत गर्न सक्छन्!
At एङ्गलबर्ट्स हामी हाम्रो धूपको चश्मामा अरू भन्दा थोरै राख्छौं। हातले बनाएको प्रत्येकसँग, हाम्रा सबै सनग्लासहरू ध्रुवीकरण गरिएको, यूवी 400०० सुरक्षित भएको, एन्टिफ्लिभेटिभ लेन्सहरू छन् र हल्का वजन भएका छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गरेर। तपाईं हाम्रो चश्मा वास्तविक प्राकृतिक काठ, इको-मैत्री, टिकाऊ, कारीगर कुँदिएको र स्टाइलिश बनेको पाउनुहुनेछ। हामी स्टेनलेस स्टील स्प्रिंग टिका, बिरालो le लेन्स प्रयोग गर्दछौं र जब यो सबै भनिन्छ र भयो तब तपाईं उत्कृष्ट मूल्य र सनग्लासको जोडी पाउनुहुनेछ जुन तपाईं जस्तो अनौंठो हो।
नियमित मूल्य $ 65.98 बचत गर्नुहोस् $ -65.98
रातो बाँस कछुआ फ्रेम गरिएको धूप का चश्मा, ध्रुवीकरण, HandCraftted, UV 400 सुरक्षा, विरोधी प्रतिबिंब बिल्ली3लेन्स, Artisan उत्कीर्ण, पर्यावरण मैत्री। कारीगर उत्कीर्ण
शामेलगस, बाँसको केस, माइक्रोफाइबर पाउच, माइक्रोफाइबर क्लीनिंग, सनग्लास स्ट्र्याप र ध्रुवीकरण टेस्ट कार्ड समावेश गर्दछ।
साइजिंग फ्रेम चौड़ाई: 5.9 इन्च - फ्रेम उचाई: १.1.9 इन्च - मन्दिर लम्बाई: 5.9 इन्च।
विशेषताहरु: Polarized: ध्रुवीकृत लेन्सहरु चमक हटाउँछ वा कम गर्छ। हाम्रो लेन्स विशेष गरी १००% UVA र UVB सुरक्षा प्रस्ताव गर्न को लागी गहन प्रकाशको स्थितिमा डिजाइन गरीएको छ। ध्रुवीकृत सुरक्षा बिना, गहिराइ धारणा कम हुन्छ, विकृत दृश्य र रंग धारणा देखा पर्दछ, र केहि अवस्थाहरूमा, तपाईं अस्थायी रूपमा अन्धा हुन सक्नुहुन्छ। ध्रुवीकरण ड्राइभिंग, चरम खेल, पानी खेल, र माछा मार्ने सहित धेरै बाहिरका गतिविधिहरूको लागि उपयोगी छ। ध्रुवीकृत धूप का चश्माका फाइदाहरू अनन्त छन् र तपाईंको दृष्टि बचत गर्न सक्छन्!
नियमित मूल्य $ 54.00 बचत गर्नुहोस् $ -54.00
एङ्गलबर्ट्स बांसको केसको साथ प्रीमियम ब्ल्याक वुड र धातु धूपको चश्मा। G15 ध्रुवीकृत लेन्स, HandCraftted, UV 400 सुरक्षा, विरोधी चिंतनशील बिराला3लेन्स, पर्यावरण मैत्री।
नियमित मूल्य $ 79.18 बचत गर्नुहोस् $ -79.18
यदि तपाईं एक लकड़ी अफिसियानादो हुनुहुन्छ भने, यी तपाईंको लागि बनेका छन्।
ईन्ग्लेबर्ट्स १००% जेब्रावुड पूर्ण फ्रेम धूप का चश्मा, ध्रुवीकृत लेन्स, हस्तशिल्प, यूवी Protection०० संरक्षण, विरोधी चिंतनशील, क्याट L लेन्स र इको-फ्रेन्डली।
शामेलग्स, नि: शुल्क माइक्रोफाईर पाउच, नि: शुल्क माइक्रोफाईबर क्लीनिंग, नि: शुल्क सनग्लास स्ट्र्याप र नि: शुल्क ध्रुवीकरण टेस्ट कार्ड शामिल छ।
साइजिंग: फ्रेम चौड़ाई: .5.75..1.8 इन्च - फ्रेम उचाई: २.१२ इन्च - मन्दिर लम्बाई: 5.7 इन्च।
ईन्ग्लेबर्ट्स प्रीमियम वालट वुड क्लब शैली धूप का चश्मा, ध्रुवीकरण गरिएको, हस्तशिल्पित, यूवी Protection०० संरक्षण, विरोधी प्रतिबिंबित बिरालो L लेन्स, आर्टिजन एन्ग्रेभ्ड, इको-फ्रेन्डली।
शामेलगस, बाँसको केस, माइक्रोफाइबर पाउच, बाक्लो माइक्रोफाइबर क्लीनिंग, सनग्लास स्ट्र्याप र ध्रुवीकरण टेस्ट कार्ड समावेश गर्दछ।
साइजिंग: फ्रेम चौड़ाई: .5.25..1.75 इन्च - फ्रेम उचाई: २.१२ इन्च - मन्दिर लम्बाई: 5.5 इन्च।
नासा, टेस्ला, एमआईटी र बीएमडब्ल्यू को सीप मात्र धूपको चश्मामा लागु भएको कल्पना गर्नुहोस्, र त्यसपछि by लाई गुणा गर्नुहोस् - तपाईंसँग इम्लेबर्ट्स प्रीमियम सनग्लास हुन्छ।
मध्यरात्रि कालो बाँस क्लब धूप का चश्मा केस, ध्रुवीकरण, HandCraftted, UV 400 सुरक्षा, विरोधी चिंतनशील, बिरालो3लेन्स, कारीगर उत्कीर्ण, पर्यावरण मैत्री।
शामेलग्स, बाँसको केस, नि: शुल्क माइक्रोफाइर पाउच, नि: शुल्क माइक्रोफाईबर सफाई कपडा, नि: शुल्क सनग्लास स्ट्र्याप र नि: शुल्क ध्रुवीकरण परीक्षण कार्ड समावेश गर्दछ!
नियमित मूल्य $ 68.18 बचत गर्नुहोस् $ -68.18
रसदार फल बहु रंगीन बाँस धूप का चश्मा, ध्रुवीकृत, HandCraftted, UV 400 सुरक्षा, विरोधी प्रतिबिंबित बिल्ली3लेन्स, कारीगर उत्कीर्ण, पर्यावरण मैत्री।
साइजिंग: फ्रेम चौड़ाई: .5.9..1.9 इन्च - फ्रेम उचाई: २.१२ इन्च - मन्दिर लम्बाई: 5.9 इन्च।
हामी प्रत्येक जोडीलाई पोर्टेबिलिटीका लागि नि: शुल्क माइक्रोफाइबर थैली, एक नि: शुल्क माइक्रोफाइबर सफाई कपडाको साथ छिटो राख्नेछौं तपाईंलाई ड्यापर, नि: शुल्क सनग्लास पट्टि दिँदै ताकि तपाईं यी राष्ट्रिय खजानेहरू नगुमाउनुहोस्। हेक, हामी एक निःशुल्क ध्रुवीकरण टेस्ट कार्डमा पनि हालिन्छौं ताकि तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईं वास्तविक सम्झौता पाउँदै हुनुहुन्छ। सबै सानो अतिरिक्त अतिरिक्त प्रत्येक खरीद मा शामिल छ कि तपाईं र हामी दुबै अलग गर्दछ,
हामीले अझसम्म काम गरेका छैनौं, तपाईंको जोडीले एक सुरक्षा बांसको केस पनि समावेश गर्दछ। यी सुन्दर हस्तशिल्प बाँसका केसहरू भन्दा तपाईंको प्रीमियम धूपको चश्मा जोगाउन यो भन्दा उत्तम तरीका छैन। यो भित्र पृथ्वीको गन्ध encapsulates। तपाईं सुख्खा पृथ्वीको सुगन्ध संग खुशी हुनेछ। सबै संग राम्रो कर्म ल्याउँदै जो यसको स्वामित्वमा छ।
नियमित मूल्य $ 72.58 बचत गर्नुहोस् $ -72.58
मध्यरात्रि कालो बाँस क्लब धूप का चश्मा केस संग, ध्रुवीकृत सूरसेट लेन्स, HandCraftted, UV 400 सुरक्षा, विरोधी प्रतिबिंबित, बिरालो3लेन्स, Artisan उत्कीर्ण, पर्यावरण मैत्री।
शामेलग्स, बाँसको केस, नि: शुल्क माइक्रोफाइर पाउच, नि: शुल्क माइक्रोफाईबर सफाई कपडा, नि: शुल्क सनग्लास स्ट्र्याप्स, निःशुल्क ध्रुवीकरण परीक्षण कार्ड समावेश छ!
साइजिंग: फ्रेम चौड़ाई: .5.5..1.75 इन्च - फ्रेम उचाई: २.१२ इन्च - मन्दिर लम्बाई: 5.5 इन्च।
नियमित मूल्य $ 61.58 बचत गर्नुहोस् $ -61.58
चेरी वुड र एसीटेट ध्रुवीकरण धूप का चश्मा, HandCraftted, UV 400 सुरक्षा, विरोधी चिंतनशील बिरालो3लेन्स, पर्यावरण-मैत्री।
शामेलग्स: नि: शुल्क माइक्रोफाइबर पाउच, नि: शुल्क माइक्रोफाईबर क्लीनिंग, नि: शुल्क सनग्लास स्ट्र्याप र नि: शुल्क ध्रुवीकरण टेस्ट कार्ड समावेश गर्दछ!
एसीटेट बिरुवाबाट बनेको एलर्जी मुक्त प्लास्टिक हो। पेट्रोलियममा आधारित प्लास्टिकको विपरीत, एसीटेट प्लास्टिकहरू वातावरण अनुकूल छन् किनकि तिनीहरू प्राकृतिक नवीकरणीय सामग्रीबाट बनेका छन् जुन समयसँगै विघटित हुन्छन्।
हस्तशिल्प: प्रत्येक जोडी इle्ग्लाबर्ट्स सनग्लासहरू व्यक्तिगत रूपमा प्रीमियम काठ र कारीगर कुँदिएको गरी हस्तनिर्मित छन्। काठको दानामा भिन्नताका कारण, कुनै पनि दुई एकैनासे हुँदैनन्। तपाईं कत्तिको भिन्न हुनुहुन्छ।
ज्यास न्यू योर्क रोयस सनग्लासमा मेटल क्रस ह्याच मन्दिरहरूको आयताकार फ्रेम हुन्छ जुन चमक र प्रकाश प्रतिबिम्बित गर्दछ। तिनीहरू कलात्मक प्रविधिको नक्कल गर्न डिजाईन गरीएको छ टाढाबाट समानान्तर रेखाहरु लाई काटेर ध्वनि प्रभावहरु सिर्जना गर्न। यी तपाईंको अनुहारमा राख्नुहोस् र तपाईंको चमक चम्किन्छ।
१२MM एमएम / १ 54० एमएम / २20० एमएम
नियमित मूल्य $ 75.88 बचत गर्नुहोस् $ -75.88
चेरी वुड र एसीटे ध्रुव चश्मा बाँसको केसको साथ। HandCraftted, UV 400 सुरक्षा, विरोधी चिंतनशील बिराला3लेन्स, पर्यावरण मैत्री।
नियमित मूल्य $ 92.38 बचत गर्नुहोस् $ -92.38